crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Siyaasi Hungary: “Islaamku waa rajada maanta u taagan bani’aadnimada.” | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Dunida Muslimka March 13, 2017	0 228 Views
Budapest, Hungry (Himilonews) – Inta lagu guda-jiray doorashadii dhawaan ka dhacday dalka Hungry, dhaq-dhaqaaqa Jobbik wuxuu tirada codadka la dhiibtay ka helay 16.67% taas oo ka dhigan in xisbigu uu 47 kursi ku yeelanayo awoodda siyaasadeed ee dalka.
Wax-yar kadibna, madaxa Jobbik wuxuu booqasho aan horay loo sii shaacin ku tagay dhowr jaamacadood ee ku yaalla gudaha dalka Turkiga.
“Uma imaanayno dalka Turkiga inaan dhisno xiriir diblomaasi iyo mid dhaqaale toona, hayeeshe inaan la kulanno walaalladeenna Turkiga ah,” ayuu yiri Gábor Vona, madaxa xisbiga Jobbik.
Wuxuu sidoo kale ku andacooday in Galbeedku aysan u dulqaadan karin inay arkaan taageerada ay la garab taagan yihiin Turkiga iyo dadka Turinian-ka ah sida Azerbaijanis-ka xilliyada ay jiraan xasaradaha caalamiga ah.
Gábor Vona wuxuu sheegay in dhaqdhaqaaqiisu uusan xiriir la laheyn Islaam-naceybka. Wuxuu sidoo kale dadka Turkiga ku sifeeyey qoysas ku koraya jaceyl, wadaniyad iyo qadarinta dhaqamada kale – taas oo tusaale u ah dalkiisa Hungary.
Marka loo eego Vona, xiriirka ka dhaxeeya Turkiga iyo Hungary ma ahan oo kaliya saaxiibtinimo ee waa wada-noolaansho muddo soo jirtay. Wuxuu sidoo kale meelo badan ka yiri: Islaamku waa rajada ugu danbeysa ee bani’aadannimada ku hartay oo kasoo haraya nidaamyada afduubka iyo xurriyad beenaadka.
Sidoo kale ka hadalka doorka Islaamka ee dunida, Vone wuxuu barta xisbigiisa ku daabacay: “Afrika malahan awood; Australia iyo Koofur America waxay iyaguna la diihaalsan yihiin dunida qarawga ee Galbeedka. Sii eegista mushkiladahan, waxaa haray oo kaliya hal dhaqan kaas oo u baahan in la ilaaliyo – waana dunida Muslimka iyo Islaamka.”
Waxaa intaas kasii baxsan, Vona wuxuu sheegay in noloshiisa shaqsiyadeed ay saameyn ku lahaayeen Muslimiin badan. Hayeeshe layaab sunniyaha lala taago waxaa noqday, markii xafladda arooskiisa lagu arkay nin Falastiini ah oo ay yihiin saaxiib dhow taas oo mucaaradkiisu ay dhaliileen.
Next: Dhageyso: Xog la xiriirta xulashada abuurka iyo saameynta uu ku leeyahay tacbashada fiican.